ukunikezelwa ukhululekile Phnom Penh / Siem Reap
Kufuneka ubuye emva Gem? gem.agency yenza kube lula. Sizama ukunyaniseka kwabaxhasi ngaphezu kwayo yonke into. Ukuba phakathi kweentsuku ze-30 zokufumana i-stonestone (s) ukuba awuhlali unelisekile nge-oda yakho, unokusibuyisela yona kwimeko yangaphambili kunye engafanelekiyo. Iimpawu zingabuyiselwa kuphela ngeli xesha le-30 yokuhlola. Nceda imeyile GEMIC Laboratory ngenxa Return Authorization Number (wagidima) Kunye Imiyalelo Return olongezelelweyo. QAPHELA: Orders ibuyiselwe kuthi ngaphandle wabaleka ziya wala waza wabuyela kumthumeli. imirhumo zokubopha nokuthumela ukubuyela luxanduva kumthumeli. Zonke kwiintengiso zezokugqibela emva kweentsuku 30 (izinto babuyela kufuneka postmarked zingaphelanga iintsuku 30 komhla we-odolo ifunyenwe). Nceda andali unikezelo yeposi, ukuba unqwenela ukurhoxisa umyalelo emva kokuba ngeenqanawa, kodwa ngaphambi kokuba bunikelwe. Ukuba umyalelo saliwe, umthengi uya kuthwala uxanduva ngokupheleleyo ixabiso izinto xa konakele zonke iintlawulo zoshishino kunye nemisebenzi ezenziweyo ekubuyeni kwayo. Iinkcukacha ezongezelelweyo odolo phandle yaseUnited States: Kumazwe amaninzi, ibhengeze ekuthumeleni ixhomekeke nemirhumo esebenzayo amasiko kunye irhafu. Abathengi banoxanduva naziphi amasiko, irhafu kunye nemisebenzi oyityalayo. Imbuyekezo eyenziwe ngenxa ngentla ayikwazi eligunyazisiweyo. ** Zonke iimali kwenziwa ngokusebenzisa indlela efanayo intlawulo ifunyenwe. iindleko emikhombeni, inshorensi kunye nokulungiswa credit card non-ayibuyiswa. Akukho ntlawulo restocking. Amalalela ezifundiswayo. Imibuzo Okuninzi? Qhagamshelana nathi
Security & yabucala
GEMIC Laboratory unenkxalabo ngokhuseleko kunye nokhuseleko nabathengi bethu. Siza kuqinisekisa ukuba inkqubo transaction yethu ikhuselekile ngokugqithisileyo kwaye ulwazi abathengi yethu ikhuselekile.
GEMIC Laboratory njengesiseko inkcazelo yobuqu kwi website yayo. Idilesi yakho ye email inokusetyenziswa okwethutyana lungenisa email okanye umyalelo.
GEMIC Laboratory usebenzisa ibrawuza cookies ukwandisa utyelelo lwakho kwaye ukwenza inqwelo yethu ukuthenga onlayini. Akukho nkcukacha yobuqu ligcinwa cookies. Cookies kufuneka nako ukufikelela zonke iinkalo site yethu. Kuba imibuzo nceda uqhagamshelane nathi.
ngamana odola isatifiketi xa udibanisa kwento ukuze inqwelo yakho. Ukwenza oku, nqakraza kwikhonkco "Faka isiqinisekiso gem le nto" kwiphepha item iinkcukacha ngaphezu "ngeza kwitshathi" iqhosha. Oku kuzakuvula iinketho isiqinisekiso.
Zonke izinto enesiqinisekiso e GEMIC Laboratory. Siza kuqinisekisa ukuba usoloko ufumana into uhlawulela.
Zonke GEMS GEMIC Laboratory enesiqinisekiso ukuba njengoko kuxeliwe. abasebenzi bethu ingcali ukuhlola ngononophelo kwaye silinganise gem nganye.
Wonke amatshe evela GEMIC Laboratory gem yendalo adalwe Umhlaba. Asazi ayolanda "GEMS" eyenziweyo okanye ilebhu-zadalwa.
Ukukhangela-phandle sikhuselekile, ekhuselekileyo kunye lula kunye GEMIC Laboratory. Sinikeza ndlela zilandelayo bhetyebhetye intlawulo lokuqukumbela umyalelo wakho:
Pay ngecredit card nge PayPal (akukho akhawunti iPayPal efunekayo) PayPal yamkela Visa, Visa Delta, Visa Electron, MasterCard, EuroCard, Maestro kunye American Express. ulwazi yokhuseleko PayPal.
Hlawula akhawunti yakho PayPal Siye wayelilungu PayPal zingqinisiswe. Phawula: Ukuba ngaba awunayo i-akhawunti, ungenza ngokulula ukuvula i-akhawunti entsha ngokulandela imiyalelo kwi-screen.
Hlawula ezithunyelweyo Western Union Xa uhlawula transfer Western Union, izinto zakho ziya kugcinelwa iintsuku ezintathu. Nceda imeyli kule nombolo imali transaction eyodwa (MTN #) sokudluliselwa yakho. Xa imali ziye zafunyanwa, siza kuqwalasela umyalelo wakho. Phawula: imirhumo yokuGqithisela kufuneka ayinakutsalwa imali ifunyenwe.
Hlawula nge banki ngqo Xa uhlawula ngebhanki ngqo, izinto zakho ziya kugcinelwa iintsuku ezintathu. Nceda imeyli yebhanki ikhowudi transfer yesalathiso xa aye aqalwa intlawulo. Xa imali ziye zafunyanwa, siza kuqwalasela umyalelo wakho. Phawula: imirhumo yokuGqithisela kufuneka ayinakutsalwa imali ifunyenwe.
Xa sele ukulungele khangela-out:
Hlola kwinqwelo yakho yokuthengela uze ukhethe indlela yokuthumela. Sihambise zilandelayo iindlela yokuthumela ezimbini amazinga; EMS (Iintsuku 3-4) Standard Worldwide International yomoya (iintsuku 10-21)
Nqakraza "ukuqhubeka ekuphumeni" kwaye ngenisa idilesi yakho yokuthumela.
Khetha indlela yokubhatala yakho uze ucofe "ukuhlawula ngoku".
Faka ulwazi lwakho lokubhatala, okanye uprinte imiyalelo yeskrini ekhutshelwe imali. Xa i-oda lakho lifakwe ngempumelelo, uya kufumana ukuqinisekiswa kwe-imeyli kuthi [Imeyile ikhuselwe] Phawula: Nceda uqinisekise ukuba wongeza "[Imeyile ikhuselwe]"kuluhlu lwakho lweefowuni ezikhuselekileyo ze-imeyile ukuze uqinisekise ukuba unokufumana i-imeyile yethu yokuthumela nokuthumela i-oda. Ukuba awufumani nayiphi i-imeyile evela kuthi, nceda qiniseka ukuba uhlolisise ugaxekile okanye ifowuni ye-imeyli engekho. imali yeloo lizwe Ikhadi lesikweletu kunye neentlawulo ze-PayPal ziya kuhlawuliswa kwiidola zase-US kuphela. Intlawulo nge-Western Union okanye ngokutshintshwa kwebhanki kufuneka ithunyelwe kwiidola zase-US kuphela. Xa ukhetha imali ngaphandle kweedola zase-US, izinga lokutshintshiselwa kwimihla yangoku liya kusetyenziswa ukuguqula amaxabiso abonisiwe. I-PayPal kunye neebhanki yakho yokucwangcisa (ibhanki lekhredithi elikhupha ibhanki) liya kusebenzisa amanani abo okutshintshiselwa ukuguqula iirhafu, ngoko ke, iindleko ezikhethiweyo zemali zakho ezikhethiweyo ziyahlukahluka kumaxabiso aboniswe kuloo mali kwiwebhusayithi yethu. ILebhu ye-GEMIC iya kuhlawula kuphela imali eboniswe kwiidola zase-US. Naliphina iirhafu ezongezelelweyo zisekelwe kuphela kwi-PayPal's, ikhadi lakho lekhredithi elikhupha i-bhanki okanye ye-Western Union.
Nceda ujonge apha ngezantsi ukuze Iinketho zethu ngeeNqanawe: ukunikezelwa ukhululekile Phnom Penh & Siem Reap, Cambodia
Shipping Express - USD 35
lathumela Express ngokokuqhelekileyo kuthabatha iintsuku 3-4 kunikezelo yaye kulandelelwa online zonke kwinyathelo endleleni. Zahlulo inshorensi ngokupheleleyo. A Intsayino iyafuneka ezizisiweyo. Ukuhanjiswa ke ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu kumazwe amaninzi. Akukho iibhokisi PO (ngaphandle UAE, Saudi Arabia kunye Kuwait), Apo okanye kwiidilesi FPO zingasetyenziswa. Phawula: Ukuba unayo 'utyikityo kwifayile', nceda ufowunele EMS sokurhoxisa esisigunyaziso. Iipasile ezinikezelwa ngaphandle utyikityo, ngenxa 'utyikityo kwifayile' ayikwazi kuhlawulwa yenethiwekhi yethu inshorensi.
Standard ebhalisiwe Mail - USD 6.99
Bonk yomoya ebhalisiweyo ngaphezulu kumazwe 120. ngeposi ebhalisiweyo Umkhuseli ngenxa ukuya USD 200. Ekuthumeleni bathathe iintsuku malunga 10-21 ukusebenza kwaye zifuna utyikityo phezu kweenkonzo. Akukho zincwadi ngeeCawa.
ukufumaneka Zonke GEMS aboniswa njenge 'ekhoyo' sele stock kwaye alungele kwiinqanawa ngokukhawuleza. Imiyalelo zilungiswa ngaphakathi usuku lokusebenza 1 ngoMvulo - ngoLwesihlanu (kungabandakanywanga iiholide Khmer). Ulwazi Olongeziweyo for Non-USA ekuthumeleni Kumazwe amaninzi (hayi USA) ekuthumeleni akudandalazise zixhomekeke iintlawulo amasiko kunye nerhafu. ngeposi ebhalisiweyo kuthatha ixesha elide, kodwa ngokuqhelekileyo ungafudumezi iifizi. Siyavuya ukuba isikhephe EMS, kodwa nceda uqaphele ukuba akukho ulawulo ezigxineni ezingaphezulu ezinokuthi zenzeke kwilizwe lakho. Phawula: ntela okanye umsebenzi luxanduva umthengi lowo. okuzo babuyela ukuba wala ngenxa ntlawulo onjalo, aziyi kwamkelwa. Ungaqhagamshelana nathi xa ufuna nawaphi na amalungiselelo awodwa. invoyisi Zonke pasile GEMIC Laboratory ziquka invoyisi ngokupheleleyo. Ndiyacela Qhagamshelana nathi phambi kokufaka i-odolo yakho, ukuba udinga invoyisi yokwemfuneko okanye akukho invoyisi konke konke.
GEMIC Laboratory usebenzisa isikali ingcaciso kulandelayo xa behlela anqabileyo: IF : Loupe uhlambulukile - ngaphakathi bangawenzi; free of inclusions. VVS : Phantse loupe uhlambulukile - inclusions kakhulu, kancinci kakhulu; inclusions ngokulambisa endibubonileyo phantsi 10x sikrini. VS : Eye ehlambulukileyo - inclusions kancinane kakhulu; inclusions kancinane sibonwe iliso abaqeqeshiweyo okanye ngaphantsi 10x sikrini. SI : Ifakiwe kancane - inclusions ezincinane kunokubonwa ngeliso lenyama. I : Okuqukiweyo - inclusions kunokubonwa ngeliso lenyama.